Nolashiisii Ilaa Xanuunkiisii ilaa geerirudu u timi iyo wixii aan Marxuum Xaaji shide ku xasuusto. | Berberatoday.com
Nolashiisii Ilaa Xanuunkiisii ilaa geerirudu u timi iyo wixii aan Marxuum Xaaji shide ku xasuusto.
Alle how naxariistee waxaa Maanta Xaabalaha Nasahablood si aan kala hadh lahayn oo aas islaam ah lloogu aasay Marxuum Xaaji shide Xaaji Diiriye Xaaji Farax, oo Muddo yar oo kooban ku Xanuunsayey Cusbitalka Gar-gaar ee magaalada Hargaysa.
Marxuumka waxaan ka ag dhowaa Shantii Sanno ee u danbeeyay oo aanu saaxiibo gaara ahayn wakhtiyo gaara iswaraysan jirnay, Alle qabriga how nuur isaga iyo wixii islaam ah bee waxaan maalin ka hor aan ku bookhday Marxuumka Cusbitalka Gar-gaar isaga oo wakhtigaa Isla maqan wuxuu ku hadrayey Salaad xidhasho iyo qaran akhris isaga oo miyir la ayuu lahaa ma la ee daa may?.
Intuu Xaajigu Cusbitalka yaalay waxaan kala go’in siyaaraadka ay culimada dalka iyo dadka kale ee ahlu karaamka ahi ugu imanyeen iyada oo meel la kala istaago la waayey.
Dadkii aaskiisa ka soo qaybgalay waxay Dhamaantood u markhaati kaceen inuu ahaa Tiirarka masaajidka hadba uu joogo, wuxuu ahaa qaari Quranka xidhiidh joogta ah la leh, Wuxuu ahaa daaci dadka khayrka la jecel oo hadana duco badan, wuxuu ahaa qof ka masaajidka ugu soo horeeya hadana ugu dambeeya.
In ku dhow tobon masjid oo uu suxbo la lahaa ayaa salaatu Jinaaso qaayib ah lagagag soo tukuday.
Marxuumka waxaan Ilahay uga baryayay inuu Janadiisii fardawsa geeyo ahalkii iyo qarabdii iyo Culimadii uu ka baxayna samir iyo iman ka siiyo.